ISKA ILAALI CUDURKA CORONA VIRUS (COVID19) – QEYBTA LABAAD
SIDA LOOGA HORTAGO CAABUQA COVID19 (COVID19)
SUULINTA FIKRADAHA QALDAN EE LAGA AAMISAN YAHAY COVID19
Fayraska ma ku fidaa dhulka kulul?
Cudurka dadka aana Muslimka ahayn kaliya miyuu ku dhacaa?
Cudurka dadka waaweyn kaliya miyuu ku dhacaa?
Ma waxaa jira cunnooyiin ama cabitaano gaar ah oo loo cuno Cudurka?
Kaneecada ma gudbisaa Fayraska?
Daawada Antibayootiga ma lagu daawen karaa Fayraska?
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo guddoomiyay shir muhiim ah oo u dhexeeyay Soomaaliya iyo Midowga Yurub.